बाइडेन चुनाव : डोनल्ड ट्रम्पकाे विरूद्धमा बराक ओबामा ! « News24 : Premium News Channel
बाइडेन चुनाव : डोनल्ड ट्रम्पकाे विरूद्धमा बराक ओबामा !
एजेन्सी, भदाै । जोए बाइडेन अमेरिकामा आगामी नोभेम्बरमा हुन लागेको राष्ट्रपति पदका लागि बलियो प्रतिष्पर्धीको रुपमा देखिँदैछन् । डेमोक्रेट्सको तर्फबाट उम्मेदवारमा छानिएपछि ७७ वर्षीय बाइडेन यसअघि बाराक ओबामाको राष्ट्रपतिकालमा उपराष्ट्रपति बनिसकेका नेता हुन् ।
हाल डोनल्ड ट्रम्पविरुद्ध बलियो प्रतिष्पर्धीको रुपमा उनी खडा भएका छन् । तर उनले यदी आगामी निर्वाचन जिते भने उनी नै अमेरिकाको सबैभन्दा बढी उमेरको राष्ट्रपति हुनेछन् । तर उनै बाइडेनका लागि अमेरिकामा सक्षम र युवा महिला नेत्रीहरुले साथ दिएका छन् । जसमध्ये तीन महिला नेत्रीको नाम प्रमुखताका साथ अघि सारिएको छ ।
कमला हरिस, भल डेमिंग्स र सुसान राइस बाइडेनको सम्भावित उपराष्ट्रपति बन्ने दौडमा छन् । उनीहरुमध्ये कमला अमेरिकी राजनीतिमा प्रभाव जमाउनसक्ने जवर्जस्त महिला हुन् । उनी क्यालिफोर्नियाबाट विधायक बनेकी हुन् । यस्तै भल फ्लोरिडाबाट विधायक बनेकी हुन् भने सुसन पूर्वराष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हुन् ।
बुधबार भइरहेको भर्चुअल आयोजनामा कमला ह्यारिसको समर्थनमा अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा र सन् २०१६ मा डोनल्ड ट्रम्पसँग हारको सामना गरेकी हिलेरी क्लिंटनले पनि समर्थन गरिदिन अपिल गर्ने तयारीमा छन् ।
अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जो बाइडन र कमला ह्यारिसको समर्थनमा जुन कुरा बोल्दै छन् त्यसमा उनले बाइडेनसँग आफ्नो कामकाजी अनुभवलाई साझा गर्नेछन् ।
उनको लिखित भाषणको अंश अनुसार बराक ओबामाले उक्त सम्बोधनमा भन्नेछन्, ‘आठ वर्षसम्म राष्ट्रपति पदमा रहँदा हरेक ठूला निर्णयमा जो बाइडेन मेरो पछाडि उभिएका थिए । उनले मलाई उत्कृष्ट राष्ट्रपति बनाए । उनीसँग यो देशलाई उत्कृष्ट बनाउनका लागि अनुभव र चरित्र छ ।’
यतिमात्रै होइन, अमेरिकाका ४४ औं राष्ट्रपति बराक ओबामा आफ्नो सम्बन्धमा ट्रम्पमाथि पनि निशाना साँध्ने छन् । उनको भाषणको अंशमा लेखिएको छ, ‘मैले आशा गरेको थिएँ कि देशका लागि डोनल्ड ट्रम्प आफ्नो जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक लिनेछन् तर उनले कहिल्यै त्यस्तो गरेनन् ।’
ओबामाले आफ्नो भाषणमा अमेरिकामा लोकतन्त्र खतरामा भएको पनि बताउनेछन् । ओबामाको भाषणका केही अंश सार्वजनिक भएपछि डोनल्ड ट्रम्पले आफ्नो प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् ।
ट्रम्पले भने, ‘राष्ट्रपतिको रुपमा ओबामाले राम्रो काम गरेनन् । म ओबामा र बाइडनका कारण नै यहाँ छु । किनभने यदि उनीहरुले राम्रो काम गरेको भए म यहाँ हुने थिइनँ ।’ ट्रम्पले थपे, ‘यदि ओबामाले आफ्नो काम राम्रोसँग गरेको भए उनी राष्ट्रपति चुनावको होडमा समावेश नै हुँदैनथे ।’
साथै, उनले थपे, ‘म आफ्नो पहिलाको जीवनमा अत्यधिक रमाइरहेको थिएँ । तर उनीहरुले यति खराब काम गरे कि म यहाँ राष्ट्रपतिको रुपमा उभिएको छु ।’ डोनल्ड ट्रम्पले बराक ओबामालाई खराब राष्ट्रपति पनि बताएका छन् ।